Aqoonta iyo Islaamka
Sharma'arke C.risaaq Ilmi
Islaamku wuxuu ku bilowday dhiirigelinta aqoonta dadka muslimiinta ah ee diinta islaamka soo gelaya. waxay ahayd kelmaddii ugu horeeysay qur'aanka karimka ah (iqra) oo macnahedu ayayd akhri.
Waa amar cad oo umadda musliminta ah lafarayo kor uqaadidda aqoonta.
Cilmiga' fikriga baaritaanada dhamaan noolayasha dunida kunool
amarkan kuma koobna barashada nooc kamid ah cilmiga ee wuxuu kulminayaa oo laga fahmayaa barashada wax alla wixii wax tar u leh qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa barashada culuumta kala duwan sida culuumta diinta iyo culuumta maadiga sida caafimaadka injineerinka cilmiga bulshada iyo wixii lamid ah.
Ilaah ha unaxariisto ragii kadhigay mar in dunida islaamka loosoo cilmi doonto jaamacadii ugu horaysay waxaa laga hirgaliyay (Andalus) oo hadda loo yaqaan isbayn waqtigii islaamku katalin jiray waxaa la oran jiray jaamacatu qurduba waxaa lagu baran jiray dhamaan culuumta kala duwan wakhtigaas o ay yurub ku sugnayd jahli iyo mugdi cilmiyeed.
Waa in umadda islaamku gaaraan isku filaansho dhanka aqoonta ah maxaa yeelay diinteena islaamka ayaa ina faraysa.
Waxaa caadi iska noqotay in umadda muslimiinta ku tiirsanaadaan wadamada reer galbeedka waxay awoodaan inay sumeeyaan dhamaan umadda islaamka sababtoo ah iyagaa loo daawo iyo cilmi doontaa, reer galbeedku waxay cilmi badan kaqaateen diinta islaamka iyo culumadeeda sida Ibnu siinaa, Abuubakar raasii, Bayruuni, Ibnu khalduum ,iyo kuwo kale oo badan waxaa kutubtooda lagu bartaa wadamada reer galbeedka halka dunida islaamku ka oomanyihiin waxaa laga rabaa wadamada muslimiinta inay kor uqaadaan barashada culuumta kala duwan si ay uga kor maraan dhigooda o ah reer Galbeedka.
Camalka Wanaagsan.... GUJI